Rehefa mametraka Nougat ao amin'ny Huawei P9 Lite anao ny fananganana fanandramana isa? Eto ianao manana ny vahaolana | Androidsis
Francisco Sanchez | | Huawei, Android Version
Ianao ve dia iray amin'ireo olona izay, rehefa manavao ny Android Nougat (B370 mandroso) ao amin'ny Huawei P9 Lite, manangana isa sisa amin'ny fanalahidy fanandramana raha ny tena izy dia nanao ahoana ny ho an'ireo mpanapa-kevitra beta an'ny Huawei? Matetika, rehefa mametraka rindrambaiko mbola tsy voamarina ary nanao sonia taty aoriana dia mitranga izany matetika, fa tsy mila miahiahy fa misy ny vahaolana.
Noho izany, amin'ity lahatsoratra ity dia tonga aho hampianatra anao ny fomba hiverenana amin'ny Android Nougat miaraka amin'ny fanalahidin'ny fanandramana mankany amin'ny Android Marshmallow mba hahafahanao manandrana mametaka Android Nougat tsara satria ny nahatonga an'ity lesoka ity dia ny mametraka firmware misy diso.
1 Dingana taloha alohan'ny hanombohana
2 Apetraho ny fonosana afovoany
3 Fametrahana Marshmallow (C432)
Dingana taloha alohan'ny hanombohana
Ampamoaho farafaharatsiny hatramin'ny 60% ny telefaona
Araka ny efa nohazavaiko tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia ny voalohany manaova backup avy amin'ny rakitra anay satria ity orinasa ity dia mamerina amin'ny laoniny ny telefaona manontolo.
Apetraho ny fonosana afovoany
Ity rakitra ity hataontsika tetezana izany hahafahanao mametraka Marshmallow indray. Tsarovy fa ny Ny isan'ny fanavaozana ity dia C900B300.
Any Nougat, mamorona fampirimana ao amin'ny SD antsoina hoe dload isika, esorinay ny rakitra ary apetrakay ao anaty lahatahiry noforoninay. Vonoinay avy eo ny telefaona ary manindry isika Volume-, Volume + ary Hery y ny telefaona dia hanomboka ny fametrahana azy ho azy.
Raha vao manomboka ny terminal, zahao fa ny isa fananganana dia C900B300 Mba hanarahana ny fomba fiasa dia aza taitra ianao satria ara-dalàna izany.
Fametrahana Marshmallow (C432)
Misintona izahay East Firmware firmware Marshmallow, I raha ny hevitro dia hametraka ny C432B160 aho satria tsy manome olana isan-karazany izany, ny hafa manome olana amin'ny serivisy Google ary mamela ny finday tsy azo idirana ary manery ny mpampiasa hametraka Firmware hafa izay tsy manana an'io olana io.
Mamorona lahatahiry ao amin'ny SD antsoina hoe dload isika, esorinay ny rakitra mandra-panaovana anarana hoe UPDATE.APP ary hotehirizinay ao anaty fampirimana noforoninay izany. Avy eo, vonoinay ny telefaonintsika ary atombontsika amin'ny laoniny ny famerenana amin'ny laoniny ny bokotra izay nampiasantsika teo aloha Volume-, Volume + ary Hery. Hanomboka ho azy ny famerenana amin'ny laoniny ary hanana Android Marshmallow hametraka Android Nougat isika aorian'izay raha tianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Fanalahidy fanandramana amin'ny isa fananganana aorian'ny fametrahana Nougat ao amin'ny Huawei P9 Lite anao? Eto ny vahaolana
Salama, nanao ny dingana voalohany aho ary tsy niova ny fanangonana .. mbola fanalahidin'ny fitsapana ……… .. sns.
Mamaly an'i melina
Manana P9 Lite VNS L31 aho ary toa nanao hadisoana ary nametraka ny fanavaozana ny P9 EVA-09. (Mahazo aho rehefa mandalo izany amin'ny unlocker dc)
Ankehitriny manana ny efijery mainty misy litera mena Tsy nahomby ny fanamarinana nataoko… ..
Avy any dia tsy mitranga ny ambony vitako dia ny miditra amin'ny efijery famerenana / mamafa ny orinasa.
Omeko ny famerenan'ny orinasa (miaraka amina fanavaozana ny p9 lite ao anaty fampirimana dload amin'ny sd) ary amin'ny 6% dia mijanona izy ary miseho ny fiantsoana mena.
Miezaka ny manao izany amin'ny alàlan'ny baiko adb (fastboot all unlock) fa lasa lavitra aho: tsy avela ny baiko.
Tsy hitako intsony izay hatao, misy sosokevitra?
CESAR ABAD RODRIGUEZ SALAS dia hoy izy:
José dia zavatra mitovy amiko no nitranga tamiko ary nieritreritra aho fa tsy ho afaka manamboatra azy intsony, ny fomba namahako azy dia ny fisintomana ny Rollback, nanandrana 2 aho ary io no faharoa izay niasa raha ny marina nanandrana imbetsaka aho roms hafa te-hametraka azy ireo amin'ny bokotra telo fa araka ny filazanao fa mihidy izy io rehefa te-hitondra entana aho. Andramo alaina ny Rollback an'ny android 6, dia hamerina amin'ny laoniny tsara izy io, avy eo mamoha ny OEM ianao ary mametraka ny sitrana TWRP mba hametraka android 7
Valiny amin'i CESAR ABAD RODRIGUEZ SALAS
Miguel l dia hoy izy:
Mila fanampiana lehibe aho manana ny Huawei Mate 9 lite Bl-l23 izay havaoziko azy ho nougat (NRD900M, fanalahidy fanandramana). ary rehefa mamerina indray aho dia mahazo zavatra toy ny »tsy nahomby ny fitaovanao» Avy any Peroa aho, azoko atao ny manampy ahy azafady mba hanazava ny antony tsy dia azoko tsara, azafady.
Valio amin'i Miguel l
ny olako dia ny taorian'ny fanavaozana (sy ny fahatapahan'ny herinaratra manaraka) ny cel, dia tamin'ny fanalahidy fanandramana Compilation NRD90M. Ary mihantona matetika. Mila miverina amin'ny fanangonana nataoko tamin'ny orinasa aho; Fantatro hoe inona izany; Hatramin'ny Hisuite dia mitazona «update.zip.dbk» backup an'ny ROM tany am-boalohany aho, saingy tsy afaka miverina amin'izany avy amin'ny HiSuite aho ... toa «tsy manohana ny fanarenana ny rafitra» ny fitaovana, izany hoe manakana ny fidiran'ny ny Hi-suite
Valiny amin'i MARIANO
Still Here (Unreleased), lalao Android mampiadana be
Ampidino ny Flippy Hill, ny lalao style Crossy Road an'ny cartwheels tsy afaka atao